ခွေးတွေ သခင်ဆီ ဖုန်းခေါ်နိုင်မယ့် DogPhone – MyTech Myanmar
ခွေးတွေ သခင်ဆီ ဖုန်းခေါ်နိုင်မယ့် DogPhone
လူသားတွေဟာ စွယ်စုံ သုံးလို့ရတဲ့ စမတ်ဖုန်းတွေနဲ့ နေ့စဉ် လူနေမှုဘဝတွေမှာ တော်တော် ဟန်ကျနေကြပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ခွေးတွေအတွက် ဖုန်းတွေ မထွက်လာသေးပါဘူး။ အခုတော့ ခွေးတွေ သခင်ဆီ ဖုန်းခေါ်နိုင်မယ့် DogPhone ကို ဖန်တီးလိုက်ပါပြီ။
DogPhone ဟာ ပျော့ပြောင်းတဲ့ အရွယ်သေး ဘောလုံးလေး ဖြစ်ပြီး ခွေးက ဘောလုံးကို ကစားလိုက်တာနဲ့ Laptop နဲ့ချိတ်ဆက်ကာ သခင်ဆီ Video Call ခေါ်ဆိုနိုင်ပါတယ်။ သခင်က Video Call ကို လက်ခံပြောကြားနိုင်သလို ဖုန်းချနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သခင်က ခွေးဆီ ဖုန်းခေါ်နိုင်ပြီး ခွေးက ဘောလုံးကို လှုပ်ရှားလိုက်တာနဲ့ ဖုန်းပြောနိုင်ပါတယ်။
Glasgow University မှ DogPhone ဖန်တီးသူ ဒေါက်တာ Ilyena Hirskyj-Douglas က “ ဒါဟာ ခွေးတွေ နည်းပညာကို ထိန်းချုပ်နိုင်တယ် ဆိုတာ ပြသနေပါတယ်။ ခွေးတွေနဲ့ တခြား အိမ်မွေး တိရိစ္ဆာန်တွေအတွက် နည်းပညာတွေကို လူသားတွေ ပိုမို ဖန်တီးနိုင်ဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ “ လို့ ‌The Guardian ကို ပြောပါတယ်။
တီထွင်သူဟာ သူမရဲ့ ၉ နှစ်သားအရွယ် လာဘရာဒေါခွေးလေး ဖြစ်တဲ့ Zack နဲ့ DogPhone ကို စမ်းသပ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ခွေးက ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ဖုန်းခေါ်တာလား၊ မတော်တဆ ဖုန်းခေါ်မိတာလား ဆိုတာ ခွဲခြားဖို့အတွက် ဆက်လက် လေ့လာ သုတေသနပြုလုပ်နေကြပါတယ်။
ခွေးတွေ သခင်ဆီကို DogPhone လို ကိရိယာတွေကနေ ဖုန်းခေါ်ဖို့ သင်ကြားပေးနိုင်မလား? အနာဂတ်မှာ ခွေးတွေဟာ နည်းပညာတွေကို အသုံးပြုလာနိုင်မလား? စာဖတ်သူရဲ့ အမြင်တွေကို ကွန်းမန့်မှာ ရေးပေးသွားကြပါဦး။
MyTech Myanmar2021-11-22T17:14:05+06:30November 22nd, 2021|Mobile Phones, News|